Soo dejisan Google Earth 8.0.4.2346 – Android – Vessoft
Bogga rasmiga ah: Google Earth
Wikipedia: Google Earth
Google Earth – software ah si aad u eegto dusha ka mid ah caalamka oo isticmaalaya farsamada 3D. Software wuxuu kuu ogol yahay inaad aragtid dhul iyo dhisme, qorsheeyo wadada waddooyinka magaalada, isticmaal GPS-navigation kula socdaan cod, ka heli kartaa macluumaad ku saabsan ciriiriga waddooyinka iwm Google Earth bandhigayaa in qodobadii iyo sawiro leh oo meelo aad u fiican oo caalamka xiiso leh. Software ka kooban wadooyinka ee gaadiidka dadweynaha iyo khariidado dadka lugeeya, automobilists iyo baaskiillada. Sidoo kale Google Earth kuu ogolaanaya in aad si aad u eegto megapolises iyo xaafadahooda ama jidadka si faahfaahsan 3D.
Khariidaynta faahfaahsan oo dusha caalamka
Views macluumaadka ku saabsan meelaha aad u fiican
Muujiya magaalooyinka waaweyn ee 3D
Soo dejisan Google Earth
Faallo ku saabsan Google Earth
Google Earth Xirfadaha la xiriira
Google Translate – turjubaan caan ah ayagoo taageero ka helaya luqado badan adeega Google. Softiweerku wuxuu awood u siinayaa inuu turjuma qoraalka qoraalka sawirada iyo sidoo kale qoraalka iyo qoraalka cod gelinta.
Codsiga rasmi ah si aad u eegto macluumaadka encyclopedia ee dunida ugu weyn. Software ayaa awood u siineysaa inay akhriyaan maqaalada ku qoran luqado kala duwan oo ay wadaagaan macluumaadka laga helay iyada oo codsiyada kale.
Software ayaa loo jecel yahay in ay dhegeystaan ​​idaacadaha jecel aad ka soo adduunka oo leh awood uu ku qabsado Dooratay muusikada oo user.
software ah ee ay gacanta ku fog of computer by isticmaalaya multi-taabto gaar ah si loo maamulo iyo wareejiyo faylasha ee labada dhinacba.